အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅	25
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇူလိုင် ၂၀၁၅
Posted by kai on Jun 16, 2015 in Editor's Notes | 25 comments
ရှေးဂရိခေတ်မှသန္ဓေတည်စခဲ့ကာ ၁၇ရာစုပြင်သစ်ပြည်တွင်ပုံသဏ္ဍန်တိကျပေါ်လာသည်။ ထိုမှ ယခုခေတ်ကာလတွင်အအောင်မြင်ဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများက မိမိဇာတိပုညတို့နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြုစုကာကျင့်သုံးနေကြပါသည်။
အမေရိကပြည်ထောင်စုသည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် (သမ္မတနှင့် ဖယ်ဒရယ်ဝန်ထမ်း ၅သန်းမျှ)၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်( လွှတ်တော်အမတ်တို့၏စိနိတ်နှင့်ကွန်ဂရက်)၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်( တရားလွှတ်တော်ချုပ်) တို့ဖြင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းထောက်ပို့နိုင်သော အစိုးရဖွဲ့ထားပေသည်။ သမ္မတကို လူထုက တိုက်ရိုက်/သွယ်ဝိုက်တင်မြောက်သည်။
သမ္မတသည် စစ်တပ်၏အကြီးအကဲ Commander-in-chief ဖြစ်ကာ လွှတ်တော်မှတက်လာသော ဥပဒေကြမ်းတို့ကို ဗီတိုအာဏာသုံးပယ်ချနိုင်သည်။ ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ထုတ်နိုင်သည်။
ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ရသုံးငွေဘက်ဂျက်ကို ဖြတ်တောက်၍ အစိုးရကိုပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်သည်။လွှတ်တော်သည် အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကော်မတီ/ကော်မရှင်ဖွဲ့ကာသမ္မတအပါအ၀င် နိုင်ငံသားမည်သူကိုမဆို ကြားနာစစ်ဆေးခွင့်ရှိ၏။ တိုင်းပြည်၏ အခွန်ဝင်ငွေ၊ ဘက်ဂျက်ငွေ၊ ရသုံးငွေတို့ကို ချုပ်ကိုင်စီမံနိုင်သဖြင့် လူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်ထားသော လွှတ်တော်အမတ်တို့တွင် ငွေကိုင်အာဏာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတက ရွေးချယ်ပေး၍ လွှတ်တော်မှအတည်ပြုပေးရသော တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ တရားသူကြီး ၉ယောက်သည် အခြေခံဥပဒေကိုကိုင်စွဲကာ အခြားမဏ္ဍိုင်များကို ထောက်ပြ အရေးယူနိုင်သည်။
၂၇ကြိမ်ပြင်ဆင်ထားသည့် နှစ်၂၀၀ကျော်အခြေခံဥပဒေကိုင်ဆွဲထား၍ ယခုထိအောင်မြင်လျှက်ရှိသော ကမ္ဘာ့စံပြအစိုးရလည်းဖြစ်နေသေး၏။ ၅၀ခုသော
ပြည်နယ်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထား၍ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး(ဂါဗနာ)ကို ဆိုင်ရာလူထုကတိုက်ရိုက်တင်မြောက်သည်။ ပြည်နယ်တို့အား ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်ခွင့်ပေးထားသည့်ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်လူထုဦးရေ သန်း၃၂၀တွင် ဖယ်ဒရယ်ဝန်ထမ်းဦးရေ ရာခိုင်နှုန်း ၁.၆%မျှရှိသတည်း။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ မဏ္ဍိုင်၃ရပ်နှင့်လည်ပါတ်အုပ်ချုပ်ပါသည်။ သို့သော် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ထဲတွင်
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ(ကာလုံ) ရှိနေသည်။ ကာလုံတွင် သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ ၂ယောက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကာချုပ်)။ ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးတို့ဖြင့် ၁၁ယောက်ပါဝင်သည်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်သူကခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားရသူ ပေါင်း၆ဦးပါ အဖွဲ့ပေတည်း။ လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလာသည့်ဥပဒေမူကြမ်းကို ပယ်ချခွင့်ဗီတိုအာဏာ သမ္မတ၌မရှိသော်ငြား အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းပြုရာတွင်(၇၅%+၁)လွှတ်တော်အမတ်မဲလိုအပ်ပေရာ ကာချုပ်ကခန့်အပ်ရသည်ဆိုသော လွှတ်တော်အတွင်းရှိ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅%သည် ဗီတိုပါဝါရထားသည့်နှင့်သဘောတူနေပါသည်။ သမ္မတသည် လက်နက်ကိုင်တို့၏ဦးစီးချုပ် Commander-in-chief မဟုတ်။ သို့ကြောင့် တိုင်းပြည်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဖြစ်သော် ကာလုံနှင့်တိုင်ပင်လျှက် ကာချုပ်ကိုတိုင်းပြည်အာဏာအပ်ရမည်ဟူ၏။ လက်ရှိ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံအကြီးအကဲအာဏာစစ်စစ်သည် ကာချုပ်တွင်သာရှိသည်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကို သမ္မတမှတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တာဝန်ပေး၍ လူထုဦးရေ ၅၁သန်းတွင် တပ်မတော်အင်အား ၅သိန်းမျှရှိကာ အငြိမ်းစား တပ်မတော်သားများသည်လည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းရာထူးကြီးများ။ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအဖြစ် တိုင်းပြည်၏စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးတို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားပေသည်။
တရားရေးမဏ္ဍိုင်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရှိ၍ တရားသူကြီး ၇ဦးမှ ၁၁ဦးအထိရှိနိုင်သည်ဆိုပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် သီးသန့်ဖြစ်သော လူ ၉ဦးပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဟူ၍ သမ္မတက ၃ဦး၊ လွှတ်တော်၂ရပ်၏ဥက္ကဋ္ဌတဦးစီက ၃ဦးစီဟုဖွဲ့စည်းထားကာ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပါတ်သက်သည်များကို ကိုင်တွယ်မည်ဟုဆိုပါသည်။
မဏ္ဍိုင်၃ရပ်အား အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းထားမှု အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး သမ္မတအမိန့်၊ လွှတ်တော်၏ ဥပဒေပြုမှုတို့ကို ကာချုပ်ကမနာခံလျှင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာမရှိသလို လူထုကတင်မြောက်ထားသော လွှတ်တော်အမတ်တို့တွင်လည်း ဘက်ဂျက်ငွေကို ချုပ်ကိုင်စိစစ်ခွင့်မရသဖြင့် လွှတ်တော်နှင့် တရားရေးသည် Checks and Balances အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ကြရမည်။
ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစနစ်တွင်တိုင်းပြည်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးမွေ စီမံခန့်ခွဲရေးကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်မဏ္ဍိုင်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သည်။ သမ္မတသည် ၀န်ကြီးအဖွဲ့(ကက်ဘိနက်)ကို စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရသည်။ ဖယ်ဒရယ်ဝန်ထမ်းများသည် သမ္မတအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရသည်။
သို့သော်ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကိုအသားကျပြီးသည် ယူအက်စ်လိုနိုင်ငံတွင် သမ္မတသည် ပြည်နယ်အသီးသီးရေးရာများကို တိုက်ရိုက်တာဝန်မခံ၊ ၀င်စွက်ဖက်ရန်အခွင့်အာဏာသည်မရှိ။
သာဓကအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၁၀လက လူမည်းလူငယ် ဘရောင်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိစ္စမှစသော ဖာဂူဆန်မြို့အဓိကရုန်းများတို့တွင် သမ္မတနှင့်ဖယ်ဒရယ်အစိုးရမှတိုက်ရိုက်ဝင်စွက်ဖက်ခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်။ ပြည်နယ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းဥပဒေများလည်ှးရှိနေပေရာ အဆိုပါဥပဒေတို့သည် ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေနှင့်လည်း (အခြေခံဥပဒေနှင့်မငြိစွန်းသမျှ) လွတ်လပ်ခွင့်ရနေပေသည်။ ပမာဆိုရပါလျှင် ဆေးခြောက်ရောင်းဝယ်သုံးစွဲခြင်းကို ဖယ်ဒရယ်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိသော်ငြား ပြည်နယ်အချို့တွင် တရားဝင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြည်နယ်တို့တွင် ဂါဗနာကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရသောသီးခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ရှိသလို ရဲတပ်ဖွဲ့သည်လည်း သူ့အားလစာထုတ်ပေးထားသောဆိုင်ရာပြည်နယ်၊ မြို့နယ်ကိုသာ သစ္စာခံသည်။
အမေရိက၏ နိုင်ငံရေးစနစ်အရ ပြည်နယ်တခု၏အရေးကိုလည်း အခြားပြည်နယ်က တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဝေဖန်ခြင်းငှာမပြုနိုင်၊ တိုင်းပြည်တခုစီကဲ့သို့သဘောထားကာ သဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားသော ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေများအရသာ ဆောင်ရွက်ကြရ၏။ United Statesအဓိပ္ပါယ်မှာ တိုင်းပြည်တို့အားစုစည်းတည်ထောင်ထားကြခြင်းမဟုတ်ပါလား။
မြန်မာသမ္မတသည် ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတခုတွင်ထုတ်နိုင်သည်။ ကာလုံနှင့်တိုင်ပင်၍ လုပ်နိုင်သည့်အာဏာများစွာလည်းရှိသည်။
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အားခန့်ထားခြင်းကို ဆိုင်ရာပြည်နယ်လူထုကရွေးကောက်ခြင်းမဟုတ်မူပဲသမ္မတက ပြုရသည်။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို မူလပြုအသက်သွင်းလိုလျှင် လူထုက ပြည်နယ်၊ဒေသကြီးအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုကို ကောင်းစွာသိနားလည်ရမည်။ သို့ဆိုပါလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်အရေး၊ လက်ပံတောင်းတောင် ၊ ဘင်္ဂလီ၊ ၀နှင့်လောက်ကိုင်ကိစ္စတို့တွင် အဓိကတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမည့်သူမှာ ဆိုင်ရာနယ်လူထုနှင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ အခြားပြည်နယ်သားများနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဆိုင်ရာဒေသ၏လူထုသဘောထားနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဦးစားပေးအလေးထားရပေမည်။
လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေအရ အစိုးရမဏ္ဍိုင်အားလုံး(အားလုံး)တို့တွင် အာဏာကိုင်ထားသူများသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတခုတည်းမှဖြစ်နေကာ ပါတီဝင်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အပြင် စစ်သားဟောင်းကြီးများဖြစ်ကြ၏။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်(ကြည်း ၁၁၂၅၂)၊ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း(ကြည်း ၁၁၅၃၄)၊ တရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး(ကြည်း ၁၅၅၅၇)တို့အပါအ၀င် လက်ရှိအစိုးရမဏ္ဍိုင်အားလုံးအားလွန်စွာခိုင်မြဲသော သွေးသောက်ညီနောင်များအဖြစ် ဖွဲ့ချည်ထားသော ကြိုးရှိနေကာ အဆိုပါဘွဲ့ချည်ကြိုးသည် မြန်မာ့တပ်မတော်မှလာသည်။ သို့ဆိုသော် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်၏ အာဏာအရှိဆုံးစတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုပါလျှင် ငြင်းဝံ့ပါသလော။
ကမ္ဘာနှင့်မတူ X၀င်ထူးခြားသည်မှာ ကျေးရွာ၊ရပ်ရွာ အခြေခံအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးသြဇာကို ရှေးအစဉ်အလာအရ ထေရာဝါဒဘုန်းတော်ကြီးများထံတွင်လူထုက ဓလေ့ထုံးစံယဉ်ကျေးမှုခေါင်းစဉ်ဖြင့်အပ်နှံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံပညာရေးစနစ်သည်လည်း မြန်မာ့သမိုင်းအစဉ်အဆက် ဘုန်းတော်ကြီးများထံတွင်သာကိုင်တွယ်ဖန်တီးခွင့်(အများစု)ရှိပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးအင်အားမှာ ၅သိန်းကျော်ရှိပါသတည်း။ လူထုက စားဝတ်နေရေးထောက်ပံ့လှူတန်းထားသော သီလရှင်နှင့် ကပ္ပိယ ဘာသာရေးဆက်စပ်မိသားစုများပါထည့်တွက်လျှင် ဦးရေ ၁သန်းမကရှိလိမ့်မည်ထင်သည်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ မဲပေးခွင့်ကားမရှိ၊ လူတို့ဥပဒေနှင့်ကင်းလွတ်၍နေရ၏။ ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်ဟုဆိုပါလျှင် မှားမည်လော။
သာမန်အတိုင်းဆက်သွားကြလျှင် လာမည့် အောက်တိုဘာ/နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ဒီချုပ်)သည် လွှတ်တော်အမတ်အများစုနေရာကိုလက်ခံသိမ်းပိုက်ပါလိမ့်မည်။
၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်၂ရပ်နှင့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တို့မှ ဒုတိယသမ္မတ၁ဦးစီ ပေါင်း ၃ဦးရွေးကောက်တင်မြောက်လျှက် ထိုထဲမှ လွှတ်တော်၂ရပ်ပေါင်းအမတ်များကသမ္မတအဖြစ်မဲခွဲရွေူးကောက်ပေးရမည်ဖြစ်လေရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတအား လူထုမဲဆန္ဒများဖြင့်ရွေးထားသောအမတ်များက ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်သည့်သဘောဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျသည်ဆိုနိုင်မည်။
ဒုသမ္မတတို့သည် အခြေခံဥပဒေကပြဌာန်းထားသော အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံချင်းရှိမရှိကို စိစစ်ပေးရမည့်သူများမှာ လွှတ်တော်၂ရပ်၏ ဥက္ကဌနှင့် ဒုဥက္ကဌများဖြစ်ကြပေရာ ထိုအချက်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စိန့်ပြည်ကွန်မြူုနစ်ပါတီ၏ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ China သို့ ၅ရက်ကြာအလည်အပါတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုဇွန်လ ၁၀နေ့တွင်ပင် အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း၂ခုကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်မှ လွှတ်တော်တင်လိုက်ပေရာ ထိုပြင်ဆင်ချက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို အထူးပိတ်ပင်ထားသော ပုဒ်မ ၅၉(စ)အား ဖြုတ်ပယ်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။
သို့သော် မေလကကျင်းပခဲ့ပြီးသော ၆ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကိုမူ ပြန်လည်ကျင်းပဦးမည့် သတင်းများထွက်လာပါသည်။
၆ပွင့်ဆိုင်တွင် သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်သောလေးပွင့်သည် တပ်မတော်သား(ဟောင်း)များဖြစ်နေကြကာ ကာလုံနှင့် သမ္မတအရည်အချင်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များလည်း၍ဖြစ်နေကြ၏။ ၆ပွင့်ဆိုင်တွင်ညှိကြလျှက် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ခြေဥပြင်ဆင်ချက်အတွက်ပါ ပြည်လုံးကျွတ်မဲဆန္ဒရယူဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါလျှင် အချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာကိန်းဆိုက်သွားမည်ယူဆပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စိန့်ပြည်ခရီးစဉ်ကို မဟာဗျူဟာကျကျဆွဲပေးထားသူမှာ ယခုမြန်မာအစိုးရဟုပင်ဆိုချင်ပါ၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိန့်ပြည်မသွားခင် တလကျော်မျှသာစောလျှက်သွားထားသူမှာ သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်၍ ထိုမှအမေရိကားသို့ပင်ခရီးဆက်ထားခဲ့သည်။
အနောက်ဖက်ယိမ်းသည်ဟု စွတ်စွဲခံနေရသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒီချုပ်ပါတီအာဏာအချို့ရလာလျှင် မည်သည်/မည်သို့ဖြစ်မည်နည်းကို အသိချင်ဆုံးသူတို့မှာ စိန့်ပြည်၏ကွန်မြုနစ်ပါတီကိုယ်၌သာမက ယခုအာဏာရအစိုးရလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
မြန်မာပြည်တွင်း စိန့်ပြည်၏ရင်းနှီးမြုတ်နှံထားမှုတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး၊ စစ်ရေး၊ နယ်ဆက်စပ်တိုင်းရင်းသားအရေးများကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။
ဒေါ်စုအား စိန့်ပြည်မှပေးလိုသည်မှာ မီးစိမ်းလေလော၊ မီးနီလော။
မီးစိမ်းကားလင်းခဲ့ဟန်ရှိသည်။ မည်သို့ဆိုစေ။ တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လုပ်လိုမြင်လိုလျှင် အတိုက်အခံပါတီတို့သည် လွှတ်တော်ခုံနေရာများကို တောင်ပြိုကမ်းပြို ယခင်၁၉၉၀ကဲ့သို့နိုင်မှဖြစ်ပေလိမ့်။
ထိုသို့နိုင်လေဦး ကာချုပ်ကို ခလုပ်တိုက်ကျော်သွား၍ကားမရ၊ ညှိကာညှိ၍လုပ်ကြရမည်။ အာဏာချိန်ခွင်လျှာခွင့်တူညီမျှထိန်းလိုလျှင်ကား သာသနာ့ဝန်ထမ်း ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ဒီချုပ်ပါတီ လိုက်လျှောညီထွေ အဆင်ပြေရပေဦးမည်။ တပ်မတော်ကို Checks and Balances လုပ်နိုင်သည်မှာ ထေရာများ၏ ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်သာလျှင်ဖြစ်သည် ဟူလို။
အဖမြန်မာတိုင်းပြည်၏ကြမ္မာနှင့် ရဟတ်လည်ခြင်းသည် လူထု၏အမြင်ကျယ်မှုနှင့် မိုးနတ်မင်းကြီးထံတွင်သာရှိသည်ဟု ပြောလိုပါကြောင်း..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြင်ချင်ရင် လည်း အလွယ်လေးပါ။
စစ်သားတွေပဲဟာ တစ်ချက်ပဲ လွှတ်လိုက် ။
အမိန့် တစ်ချက်ပဲ လွှတ်ရုံပဲ။
ရေဘူးပေါက်နဲ့ ရေပါအောင်တောင် တတ်နိုင်ကြသေးတာပဲဟာပဲဟာပဲ။
မပြင်ချင်တော့ လည်း ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ထည့်သားတဲ့ ပုဒ်မတွေကို ပြန်ဖြုတ်ဖို့ကျမှ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေ လိုတယ်ဆိုတာတော့ နားမလည်ပေါင်!!!
kai says: ကာလုံမှာ လူ၁၁ ယောက်မဲခွဲရင်.. ၆ယောက်ကအသာဖြစ်မှာကို… အဲဒီ၆ယောက်က ကာချုပ်လူတွေချည်းဖြစ်နေတာကတချက်..။
ကာချုပ်ဆိုတာက.. အခု.. မဏ္ဍိုင်၃ရပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ ချာတိတ်လောက်ဖြစ်နေတာက.. တချက်..။
ကာချုပ်ပင်စင်အသက်ကလည်း.. ပြည့်တော့မှာ.. မသေခင်နေိုင်ငံရေးနေရာကောင်းလေး မျက်စလှမ်းပစ်နေရပြီဆိုတာကတချက်..။
လွှတ်တော်ဆိုတာ.. ဘာအာဏာမှထိထိရောက်ရောက်မရှိအောင်ထားတာက. တချက်..။
၆ပွင့်ဆိုင်မှာ.. ဒေါ်စုက.. ၀န်ကြီးအဖွဲ့ မှာ. ၁၅ယောက်လောက်ယူ.. ညွှန့်ပေါင်းဖွဲ့ပါရစေဆိုတာမျိုးပြောလိုက်ရင်.. ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးကြမယ်ထင်တာပဲ..
အကုန်ရရင်…ရ.. မရရင်ဘာမှမလိုချင်ဘူးကတော့ မဖြစ်..။
တောင်ပေါ်သား says: ၂၀၁၅ ဟာ ဒုတိယ ၁၉၉၀ တော့ လုံးဝ မဖြစ်နိူင်ပါ ၊
စိတ်ကူးယဉ်မနေပဲ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားဖို့ လိုပါတယ် ၊
အခုကြားနေရတာက ဟာ တစ်ပြည်လုံးမှာ ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလား ၊ အဲဒါဆိုရင် ပြည်နယ်တွေမှာ မဲတွေပြန့်သွားပါလိမ့်မယ် ၊
နောက်တစ်ခုကတော့ ဘယ်မှာလဲ ဒုတိယခေါင်းဆောင် တတိယခေါင်းဆောင်
ကဖ မှာက သူ့ဟာသူ ဘယ်သူပြီး ဘယ်သူဆိုတာ ရှိတယ် ၊
ဒီအချိန်မှာ အားကိုးအားထားပြုနိူင်မယ့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တွေ
မွေးရမယ့်အချိန် ( အင်းးး နောက်တောင်ကျနေပြီ )
kai says: ဒေါ်စုကအခု..အသက်…၇၀..။
နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာမျိုးက.. ကလေးသူငယ်ဘ၀မှာကတည်းက.. ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတာမျိုး..။
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒါပဲ သဂျီးရေ
aye.kk says: မှန်ပါ့သူကြီး။
Ma Ma says: US က သမ္မတတွေ ဒေါ်စုထက်တောင် အသက်ကြီးသေးတယ် မဟုတ်လား။
kai says: ဒေါ်စုက အခုလ အသက်၇၀ပြည့်မှာမို့.. သမ္မတဖြစ်ရင်တောင်.. ၇၀ကျော်..။
ယူအက်စ်သမ္မတထဲ.. အသက်အကြီးဆုံးသမ္မတဖြစ်တာက.. ရော်နယ်ရီဂင်.. ၆၉နှစ်၁၁လတဲ့..။
Have you ever wondered who was the oldest President in U.S. history? Browse this list to discover who were the oldest – and youngest – Presidents.
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကျေးဇူးအထူးပါ သဂျီး.. ကူးပြီး ရှယ်ပါမယ်… ပါတီကြည့်မရွေးဘူး.. လူကိုပဲ ကြည့်ရွေးမယ်တဲ့.. လူဆိုတာ ပါတီက မတက်လို့ ဘယ်က တက်ရမတုန်း… စိတ်တွေလည်း လေပါ့…
manawphyulay says: အဓိက ကတော့ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့ လိုတာပါပဲ သဂျီးရယ်… ဘယ်သူပဲ တက်လာ တက်လာ ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်အရင်းခံပါလာဖို့ပဲ လိုပါတယ်… ဒါနဲ့ စကားမစပ် တဂျီးလည်း အမတ်လောင်း ၀င်ရွေးခံပါလား….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett @ Maung Thura says: .မြန်မာပြည်တွင်း စိန့်ပြည်၏ရင်းနှီးမြုတ်နှံထားမှုတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်နည်း။.. .
.မြှုတ်နှံ အစား မြှုပ်နှံ လို့ ပြောင်းသင့်တယ်ထင့်… ကျန်တာတော့ မပြောတတ် ..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အဲဒီတော့ …
.သဂျီး ဆိုလိုချင်တာက ကာချုပ် အာဏာသိမ်းမယ်ပေါ့။
kai says: အခြေခံဥပဒေအရရော.. မရရော…. အစိမ်းနဲ့အ၀ါက.. အာဏာခွဲဝေမျှစား.. သိမ်းထားပြီးသားဆိုတဲ့သဘောပါ..။ အလယ်ခေတ်ဥရောပအတိုင်းဖြစ်နေတာ..။
အစိုးရမဏ္ဍိုင်၃ ရပ်အနေနဲ့က.. ဘာမှလုပ်မရ..။
ဒါကိုသဘောမပေါက်(နိုင်)တဲ့.. နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရှင်များလည်း.. နိုင်ငံရေးဥပဒေသစာအုပ်ကြီးတွေကိုင်ပြီး.. ချာလပါတ်ရယ်… လည်…။
ဒေါ်စုသမ္မတဖြစ်လာဦး.. ကိုရာဇန်အာကွီနိုရယ်..။ ဘနဇီယာဘူတိုရယ်..တို့… ဖြစ်စဉ်လိုမဖြစ်အောင်.. သတိထားကြရလိမ့်မယ်..။
ရှိတဲ့ဂွင်လေးက.. ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလေး.. လုပ်ကြပေါ့နော..။
ဒီဂွင်လေးတောင်.. သူတို့ ပေးမှရတာ..ဆိုတဲ့.. သဘော..။ သဘော…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: The Voice Weekly’s photo.
အာဏာရပါတီဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ၏ ငွေကြေးချမ်းသာမှုကြောင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအပေါ် စိုးရိမ်ရန်မလိုကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယနေ့ ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ လေ့လာရေး ရောက်ရှိလာသော ရွှေဘိုမြို့နယ်မှ NLD ပါတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက ယင်းသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြစပဲရိုး says: သူကြီး ရဲ့ အဝါရောင် ကို အသားလွတ် မဲ နေတဲ့ ရောဂါ က ပိုသာဆိုး လာသလိုဘဲ။
တကဲ့ ကို မဆီမဆိုင် ဝါးလုံးနဲ့သိမ်းကြုံး ရမ်းနေတော့တာ။
ဦးဝီသူရ တို့လို စစ်တပ်ဖား ဘုန်းကြီး လုပ်ပြီး သာသနာကို ဖျက်သူ တွေ များ လာတာ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရားအမှန်ကို ဟောပြနေတဲ့ ရဟန်း တွေကိုပါ စော်ကားသလို ဖြစ်မှာမို့ ပြောချင်ရင် နာမည်တပ်၊ ကျောင်းတပ်ပြီး ပြော ပါ သူကြီး။
မဟုတ်လဲ သူကြီး သတင်းစာထဲ ဘုန်းကြီး သတင်း တွေ မထည့်ဘဲ boycott လုပ်လေ။
kai says: အရီးလတ်မျက်မြင်ပဲလေ…။
ရွေးကောက်ပွဲနီးလေ.. ပိုမြင်ရလေ… ဖြစ်လိမ့်မယ်.။
မြန်မာတွေဘာသာရေးလိုက်စားလွန်းသမို့.. ဘာသာရေးမပါရင်.. ဘာမှလုပ်မရ/မလုပ်တတ်တော့…။
kai says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ တွေ့ဆုံခြင်း
On Thu, 2015-06-18 11:01
Issue No. No.768 Thursday, June 18, 2015
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်၊ အ တိုက်အခံပါတီအမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ဥက္ကဋ္ဌဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် လတ်တ လောတရုတ်ခရီးစဉ်အကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပရန်ရှိ သော ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း နှင့်အခြားအရေးကိစ္စများနှင့်ပတ် သက်၍ ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ ကဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အင်တာဗျူးကို ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ကနေ ဘာ တွေများ လေ့လာရရှိခဲ့ပါသလဲ။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကောင်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း တွေဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း၊ သ ဟဇာတဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်ရမယ်ဆို တာ ကျွန်မတို့အားလုံးနားလည် ကြပါတယ်။
လျူရှောင်ဘို(နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်တစ်ဦး)ကို အကျဉ်းချထား တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ သေးလား။
အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းခေါင်း ဆောင်တွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့အပြန်အ လှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့စကား တွေကို ကျွန်မဘယ်တော့မှ အ သေးစိတ်ပြန်မပြောပြ၊ မဆွေး နွေးဘူးဆိုတာကို ကျွန်မမှာရှင်းပြ နေရတယ်။ ဒါတွေဟာ သီးသန့် ဆွေးနွေးမှုတွေလို့ ယေဘုယျအား ဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အကျဉ်းချခံထားရစဉ် ကာလ အတွင်းကဆိုရင် တရုတ်က ခင်ဗျားကို ထောက်ခံအားပေးမှုမ ပေးခဲ့ဘူးလေ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျား အကျဉ်းကျတဲ့အရေးကို နိုင်ငံခြား ခေါင်းဆောင်တွေက ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားက ကြိုဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လား။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံချင်းဆီမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထုက လုပ် ဆောင်ကြမယ့်အရာဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရ ရင် အဲဒါက အမှီအခိုကင်းလွတ် လပ်မှုအပေါ်မှာအမြဲအခြေခံထား တာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့သက် ဆိုင်ရာ ကိုယ့်နိုင်ငံအသီးသီးအ တွင်းမှာ လက်ခံကျင့်သုံးလိုတဲ့ နိုင် ငံရေးသဘောတရားဝါဒီတွေအ ပေါ် ကျွန်မတို့ သဘောထားမတူရင်တောင်မှ ဒီဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းဆီမှာ လွတ် လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒီနိုင်ငံ ရဲ့ ပြည်သူလူထုက လုပ်ဆောင် ကြမယ့်အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်’’ဆို တော့ အဲဒါက မြန်မာအပေါ်အမေ ရိကန်က ကျင့်သုံးသင့်တဲ့သဘော ထားဟုတ်ပါသလား။
လူအားလုံးဟာ သူတို့နိုင်ငံ အတွက် သူတို့လိုချင်တာကို လုပ် ဆောင်ကြတယ်လို့ ကျွန်မထင် တယ်။ ပြီးတော့ အမှန်ပဲပေါ့။ ဖြစ် နိုင်ရင်တော့ မိတ်ဆွေတွေအကူ အညီကို မျှော်လင့်ကြတာပေါ့။
ကောင်းပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအ ကြောင်းမေးပါရစေ။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပြုပြီးမေး ပါရှင်။ ကျွန်မနိုင်ငံအကြောင်းကို ပြောရတာကို ကျွန်မပိုနှစ်သက်ပါ တယ်။
ဆောင်းဦးရာသီမှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ လူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အစိုးရတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ဘယ်လောက်အလားအ လာရှိပါသလဲ။
အင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားစေ တဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားတစ်ရပ် ကို ကျွန်မတို့ဝင်ရောက်လာပြီ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ် တော်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး၊ မူကြမ်းပြင်ဆင်ချက် တွေကို ကျွန်မတို့ စဆွေးနွေးနေပါ ပြီ။ ဘယ်လောက်လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ တန်းတူ ညီမျှယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေ ပေးဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥ ပဒေကို ပြင်ဆင်ထားသလားဆို တာနဲ့ ကွင်းဆက်ချိတ်ပါလိမ့် မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိနေတုန်းပေါ့။
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆိုတာ အမြဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ကျွန်မတို့သိပ်ပြီးအရေးစိုက်စာရင်းထဲထည့်မနေဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိမ့် မယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေနဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲတွေအတွက် ကျွန်မတို့ ယှဉ်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လုံးဝဥဿုံ မပိတ်ထားပါဘူး။
အဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးဆိုရင် လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော် နဲ့ သမ္မတက ထင်ဟပ်နိုင်မှာလား။
ဒါပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲတွေက လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတရင် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်မှာပါပဲ။ သမ္မတအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် အဲဒါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်၊ မပြင်ဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ ၂၅ရာခိုင်နှုန်းစိုးမိုးမှုက ကော(လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၏ လေးပုံတစ်ပုံကို တပ်မတော်က နေရာယူထားမှုကိုရည်ညွှန်း ခြင်း)
၂၅ရာခိုင်နှုန်း စိုမိုးမှုအ ကြောင်း ကျွန်မတို့သိပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ စိုးမိုးမှုတွေဆိုတာ ရှင်သိပါ တယ်။ ထာဝရရေရှည်မခံပါဘူး။ သူတို့ တည်လည်းမတည်မြဲရဘူး။ ပြီးတော့ စိုးမိုးမှုတွေဆိုတာရေ ရှည်မတည်မြဲဘဲ ပျက်စီးဖို့ပါလို့ လူတွေပြောတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မပြောင်းလဲရင် အဲဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ NLDကနိုင်ငံရေးအားသာမှုစွမ်းရည်ရှိပါ သလား။
ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဒီမိုကရေ စီစနစ်မကျဘူး။ ဒါကို ပြောင်းလဲ ရမယ်ဆိုတာ NLDအနေနဲ့အင်မ တန်မှကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ် ပြန်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ပတ် သက်လို့ ဒါကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ် ဆင့်စေ့စပ် ညှိနှိုင်းသွားရလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကနေ ထွက်သွားရေးကို ကျွန်မတို့ ဇွတ်တရွတ်အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မတို့ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံရေးပြု ပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ တာက ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုလုပ် ငန်းစဉ်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ် တယ်ဆိုတာက သေချာစေဖို့အစိုး ရဟာ စစ်မှန်တဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု တွေလုပ်လာမယ်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဟာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှာ တ ကယ်သိပ်ပြီးစိတ်မ၀င်စားဘူးဆို တာ ပိုပြီးပိုပြီး ထင်ရှားပေါ်လွင် လာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ လည်း တောက်လျှောက်ချောချော မွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မတို့မျှော်လင့် မထားခဲ့ပါဘူး။
အစိုးရက လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ရှိ ရောက်ရာမှာပဲ ရပ်တန့်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကမ္ဘောဒီးယားမှာလို အစိုး ရနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတွေက စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာများ ကို ထိန်းချုပ်နေဆဲအနေအထားနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံပေးတာမျိုးနဲ့ နေရာယူသွားနိုင်သလား။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက လုံးဝဥဿုံထင်ယောင်ထင်မှားမှု တစ်ခုအဖြစ် လှည့်ပြောင်းသွားမှာ ကို ကျွန်မတို့ တကယ်စိတ်ပူ တယ်။ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ သူဖြစ် ရမယ့်အတိုင်းဖြစ်အောင်ပိုလက် ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်မတို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ဟာ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ အင်မတန်မှ ကွာခြားပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား ရဲ့ ပြဿနာတွေထက်ကျွန်မတို့ ပြဿနာတွေက ဖြေရှင်းဖို့အများ ကြီးပိုခက်ခဲတယ်လို့ ကျွန်မထင် တယ်။ နိုင်ငံအရွယ်အစား၊ လူဦး ရေပမာဏ၊ အချိန်ကာလရှည် လျားစွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပြည်တွင်း စစ်ပွဲတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေ။
ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုး သားရေးဝါဒီမြင့်တက်တာပါလဲ။
အမျိုးသားရေးဝါဒီနဲ့ အစွန်း ရောက်ဝါဒီကြားက ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ရပ်ကို ကျွန်မတို့ရှင်း ရှင်းလင်းလင်းပေါ်လွင်အောင် လုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ စိတ်ပူတာကအစွန်း ရောက်ဝါဒီပဲ။ အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဆိုတာ သူ့ကို မှန်ကန်တဲ့နည်း လမ်းမှာ ထိန်းကွပ်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ အခါ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမ ဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက အစွန်း ရောက်ဝါဒီပါ။
အဲဒါက မြန်မာနိုင်ငံပြဿနာတစ် ရပ်လား။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အစွန်း ရောက်ဝါဒီက မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ မ ဟုတ်ဘူး ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်း မှာမဆို အစွန်းရောက်ဝါဒီက ပြ ဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံမှာ အဲဒီအစွန်းရောက်ဝါဒီ ရဲ့ ရင်းမြစ်က ဘာလဲ။ အခု အဲဒါကိုဘာကြောင့် ခင်ဗျားမြင်တွေ့နေရ တာလဲ။
အဲဒါကို ကျွန်မလည်း သိချင် လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါပေါ့ ရခိုင် ပြည်နယ်အကြောင်း ရှင်ပြောနေ တာဆိုရင်တော့ ဒီပြဿနာတွေ က ဆယ်စုနှစ်များစွာ တည်ရှိခဲ့တာပါ။ ကာလကြာရှည် ရေဆူမှတ် အောက်မှာ တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေခဲ့ တယ်။ အစိုးရကလည်း အခြေအ နေတင်းမာမှုကို ဖြေလျှော့ဖို့၊ ပဋိ ပက္ခရဲ့ ရင်းမြစ်ကို ဖယ်ရှားဖို့ လုံ လုံလောက်လောက် မဆောင်ရွက် ခဲ့ဘူး။
အခုအစိုးရဟာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံ သားဖြစ်မှုဥပဒေအောက်မှာ နိုင်ငံ သားဖြစ်မှုအခြေအနေကို စိစစ်နေ ပါတယ်။ အဲဒါကို အင်မတန် မြန် မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အင်မတန်ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိရှိ သူတို့လုပ်သင့်တယ် လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ အဲဒီနောက် မှာမှ လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ နောက်အဆင့်တွေက ဘာဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမယ်။
ရိုဟင်ဂျာရဲ့ အတိဒုက္ခနဲ့ တခြားလူ နည်းစုတွေအကြောင်း ခင်ဗျား ဒီ့ ထက်ပိုပြောကြားနေသင့်တယ်လို့ ပြောကြတဲ့ နိုင်ငံပြင်ပက မိတ်ဆွေကို ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ကျွန်မတို့ ဒီနိုင်ငံမှာ လူနည်း စုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပြီး တော့ လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အ ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သဟဇာတ အတွက် နောက်ပြီး တန်းတူညီမျှ ခွင့်အတွက် အစရှိသဖြင့် NLD နဲ့ တခြားသူတွေ ဆယ်စုနှစ်သုံးခု ကြာ တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ကြတဲ့ ဒီမို ကရေစီစံနှုန်းတန်ဖိုးတွေအားလုံး ကို ကျွန်မအမြဲတမ်းပြောနေပါ တယ်။ ဒီနှစ်တွေမှာ ကြီးမားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ကျွန်မတို့ တွေ့ကြုံခံစားကြရ တယ်။ ပြီးတော့ တခြားသူတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေ အများကြီးဟာ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အကာအ ကွယ်ပေးမခံရတာကြောင့် တိုက် ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အ ရေးကို ကာကွယ်ခြင်းဟာ အင် မတန်မှကို အလွန်သတိထားပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ် သင့်တဲ့ အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ပါ။ နောက်ပြီး အစိုးရက အဲဒါနဲ့ ပတ် သက်ပြီး လုံလုံလောက်လောက် ဆောင်ရွက်နေရဲ့လားလို့ ကျွန်မ မသေချာလှပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက် ပြီး သူတို့ လုံလုံလောက်လောက် လုပ်နေတယ်လို့ ကျွန်မမထင်ဘူး။
‘‘အင်မတန်မှကို အလွန်သတိထားပြီး’’ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာ ပါလဲ။
အဲဒါက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာသာ ရေးဆိုင်ရာ အုပ်စုတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အုပ်စုတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ ဘာလုပ်လုပ် တခြားအုပ်စုတွေ အပေါ်ကိုလည်း အကျိုးဆက် သက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိနိုင်တယ် လို့ ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဒါ က အလွန့်အလွန်ကို ခက်ခဲနက်နဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညတည်းနဲ့ ဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေက NLD ကို နိုင်ငံရေးစွန့်စားမှုအခက်အခဲ တစ်ရပ်ဖြစ်စေသလား။ အဲဒါက အဲဒီလို အစွန်းရောက်သဘော ထားအမြင်မျိုး လှုံ့ဆော်ဆွပေး နေတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD ဟာ ဘယ်လို အစွန်းရောက်ဝါဒီမျိုးကိုမှ ဘယ် တုန်းကမှ မထောက်ခံမအားပေး ခဲ့ဘူး။ ဆိုတော့ အစွန်းရောက်အုပ် စုတွေဟာ NLD ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အဖြစ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ စဉ်းစား ကြမြင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက် ပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု တွေလို့ ခေါ်ကြတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မြင့်တက်မှုရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေးအရင်းခံအကြောင်းတစ် ရပ်ရှိတယ်ဆိုတာ အင်မတန်ဖြစ် နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြဿနာက ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးဆက်သက် ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက မြို့နယ် ၁၀ မြို့နယ်နဲ့ တချို့မြို့ နယ်တွေမှာ အမှားအယွင်းတွေက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေခဲ့တာ ကျွန်မတို့ လေ့လာပြီးပြီ။ အဲဒါသိပ်ဆိုးပါတယ်။ တချို့မြို့နယ်တွေမှာ တော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိ တယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒီ စာရင်းတွေအားလုံးကို အချိန်မီ ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုသွားပြင်ကြမ လဲ။
ဥပမာအနေနဲ့ ရန်ကုန်မှာ တောင် အဲဒီလောက်ဆိုးရင်၊ နယ် စပ်ဒေသတွေမှာဆိုရင် ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ ဒီအမှားအယွင်းတွေအားလုံးကို ပြင်ရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အင်မတန်အလေးအ နက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန် မီ ဒီအမှားအယွင်းတွေကို ပြင်နိုင် ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချိန်နဲ့ နည်း ပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု သူတို့မှာ ရှိရဲ့လားလို့ ကျွန်မသိချင်မိတယ်။အစောပိုင်းကာလ လစ်ဘရယ် စနစ်ကျင့်သုံးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အခြေခံလွတ်လပ်မှုတွေ လျှော့ချ တာရှိပါသလား။
အစိုးရဟာ မီဒီယာလွတ် လပ်ခွင့်အပေါ် ဖိနှိပ်ဖို့ စတင်နေခဲ့ တယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ သတိပြု ခဲ့မိတာ တစ်နှစ်ထက်မနည်းတော့ ပါဘူး။ ရှင်လည်း ကြားမှာပဲ။ ဂျာ နယ်လစ်တချို့ကို ဘယ်လိုဖမ်း ဆီးပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ချခဲ့သ လဲဆိုတာ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ် ဟာ ရပ်ရုံတင်မကဘဲ နောက် ကြောင်းတောင် ပြန်သွားတယ်လို့ ကျွန်မတို့ ခံစားခဲ့ရတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက နောက် ကြောင်းပြန်သွားနေဆဲပဲလား။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စ ကလွဲရင် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မှာ တခြားဘာတစ်ခုမှ ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မမထင်ဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အမြင်မှာ အစိုးရဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို လုံးဝဥဿုံဆန့်ကျင်တယ်။ အဲဒါ ကတင် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် တာပဲလို့ ရှင်မထင်ဘူးလား။
အသက် (၇၀) အရွယ်ရောက်လာ တော့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
သိပ်တော့လည်း ထူးထူးခြား ခြားမခံစားရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီထိကျွန်မ လျှောက်လှမ်းခဲ့တယ်ဆို တာက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါ တယ်။
(Washington Post မှ Aung San Suu Kyi on the state of demo-cracy in Burma ကို ငြိမ်းငြိမ်းပြည့်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အင်အားကြီးနှစ်ဖွဲ့ အာဏာမျှပြီးယူနိုင်ရင်
kai says: ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နဲ့ တနိုင်း-ဟူးကောင်းဒေသက စိုက်ခင်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၅၀၀ ကျော်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ထံ ဒီနေ့ ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်လုပ်သားတွေဟာ အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေတာကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် နေရပ်ကိုပြန်ပို့တာဖြစ်တယ်လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက် ရခိုင်ရိုးရာစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြူသာချေ က ပြောပါတယ်။
“ရွေ့ပြောင်းသွားလာနေတော့ ကျောင်းနေဖို့လည်းခက်ခဲတယ်၊ ပြီးရင်တောထဲတောင်ထဲဆိုတော့ ကျန်းမာရေး စသည်အားဖြင့် ပြီးရင်အလုပ်ဆိုရင်လည်း တစ်ပတ်မှာ သုံးရက်တောင်ပြည့်အောင်မရှိဘူး၊ ကိုင်းခုတ်တဲ့သူတို့ ငှက်ပျောခြံတွေမှာ လုပ်ကိုင်ကြတယ်၊ တချို့ရာဘာခြံတွေမှာ စသည်အားဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြတယ်၊ အခက်အခဲပေါင်းစုံ ကြုံတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး လူမှုရေးပေါ့ အားလုံးအစစအရာရာ ယိုယွင်းတာပေါ့ခင်ဗျာ”
အရင်က ရခိုင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၉၀၀ ကျော်ကို ပို့ဆောင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ကျန်တဲ့ ၄၀၀ လောက်က အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ဈေးဆိုင်တွေကနေ ချေးယူထားတဲ့ ငွေကြေးတွေ ပြန်လည်မဆပ်နိုင်တာကြောင့် နေရပ်ကို မပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အိမ်ထောင်စု ၁၅၀ နီးပါးက လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့ကနေ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွာထောင်ဘူတာကို သီးသန့်မီးရထားနဲ့ စတင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကတဆင့် မော်တော်ကားတွေနဲ့ မကွေး-အမ်း တောင်ကြားလမ်းကနေ စစ်တွေမြို့ကို ဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုပို့ဆောင်တာဟာ ရခိုင်ရိုးရာစာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး စတဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေ၊ မီးရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းလာရောက်လုပ်ကိုင်သူ အရေအတွက်ဟာ တစ်သိန်းကျော် လောက်ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ် ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
kai says: ဖယ်ဒရယ်စနစ်ရဲ့သဘောကို ထင်ဟတ်တဲ့.. သတင်းမို့တင်တာပါ…။
မြန်မာ့မြောက်ဖျားဒေသရဲ့.. ပြည်နယ်အတွင်းရေးတွေကို.. လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလိုထင်ပြီး.. . ၀င်စွက်ဖက်နေတဲ့… တခြားပြည်နယ်… တိုင်းဒေသနေ.. ဗမာများသိစေလို…။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခိုင်ေ၇
အခုလို ရခိုင်တွေပြန်ရွှေ့ပေးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့
ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်မရှိတော့ပါဘူးလို့ အော်နေတဲ့ အတွက်ပါဘဲ
ကျန်နဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်က အခြားတိုင်းရင်းသားများ ကိုတော့ ရွှေ့ မယ်မထင်ပါဘူး
ကျနော်တို့ ဆီမှာက အသားလွတ်ဟောက်တဲ့ကောင်ကဟောက်
နိုင်ငံတကာ စာအုပ်ကြီးနဲ့ချိန်သူက ချိန်ပြီးပြော
ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ချ ချ ဆိုတဲ့ကောင်က တစ်ပုံကြီး
ဆင်ခြင်မူ့ ကို အဓိက ထားပြီး ဟောကြားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံက
လူတွေက သူများပြောတိုင်း အဆင်ခြင်မဲ့ စွာယုံကြတာကို ပါဘဲ
kai says: ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံလို့.. ကပေါက်ကထင်နေတုံးကိုး…
အဲဒါ.. တရား… ဓမ္မမဟုတ်.. ဗုဒ္ဓတရားမဟုတ်.. မှားနေလို့ပဲ…။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်ရဲ့သဘောသဘာဝမှာကို… က…. ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဟာ.. တိုင်းပြည်တခုစီလိုပါပဲ..။
အပြင်က၀င်လာတဲ့သူတွေကို.. တခြားပြည်နယ်ကလာသူတွေဟာ… အပြင်လူများဖြစ်ပါကြောင်း…။
kai says: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက် ၍ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှုကို စဉ်းစားတော့မည်မဟုတ် ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားသည်။ ‘‘ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အန်တီက သိပ်ပြီးတော့ မစဉ်းစား ဘူး။ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်အကြောင်း၊ မစဉ်းစားတော့ဘူး။စဉ်းစားနေရင် လည်း နည်းနည်းအချိန်ပိုကုန်တာ ပဲရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာပဲ ဆက်ပြီးလုပ်သွားတော့မယ်’’ဟု ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင် ဆင်ရာတွင် အခက်အခဲမဖြစ်စေ ရန် ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံမှုကို မူလက ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြု လုပ်ရန် သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ သော်လည်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အရေး ကြီးပုဒ်မအချို့ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း ဆွေးနွေးရာတွင် အကျပ်အတည်း မဖြစ်ပေါ်စေရန် ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံမှုကို နှစ်ကုန်ပိုင်း၌ ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီး ယခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းတွင် ခြောက်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံမှုတစ် ကြိမ်သာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပထမအကြိမ်တွေ့ ဆုံရာတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊လွတ် လပ်ပြီးတရားမျှတသော ရွေး ကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စသည့် အခြေခံမူဘောင်များကို နှစ်နာရီ ကျော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ အဖြေထွက်ခဲ့ခြင်းမ ရှိခဲ့ဘဲ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမည့် အချိန်ကာလပင် မသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ ပေ။ အဆိုပါခြောက် ပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံမှုတွင် ပါဝင်သူများမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး ခင်အောင်မြင့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ဖြစ်သည်။ 7daysdailynews
kai says: ပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဌကလည်း ခြေဥ ပြင်ချင်ပုံရတယ်..။
တပ်ကတော့.. တပ်ချုပ်ဆန္ဒအတိုင်းမို့ No ပေါ့…။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ.. ၆ပွင့်ဆိုင်လိုနေရာကနေသာ တပ်ချုပ်ကို ရှင်းပြညှိနှိုင်းလို့ရမယ်အခြေအနေကို.. ဒေါ်စု မစဉ်းစားနိုင်ဖူးပြောလိုက်တာ သိပ်သဘောမကျဘူးဖြစ်နေမိ….။
၆ပွင့်ဆိုင်မှာ.. တပ်ချုပ်ရဲ့စီနီယာ.. တပ်ထွက်ကြီးတွေပါနေမင့်ဟာနော..။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကသာ Win-Win ထွက်ပေါက်လို့ထင်..။
kai says: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၅၉-ဃ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပူးတွဲပြုလုပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၁ ရက် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စည်းဝေးပွဲမှာ သူက အချိန်၊ လုပ်အားနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေကြေး ကုန်ကျမှုကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်လို့ ခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ထဲ ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။